खेलकुद | Kantipur TV HD
एशिया कपको अवसर झरीले रोकेपछि क्रिकेट प्रशिक्षक र खेलाडीको आँखामा आँसु
लक्ष्यको नजिक पुगेर पनि पछाडि र्फकनु पर्दाको पीडा कस्तो होला ? सोच्दानै मुटु ढक्क हुन्छ । नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम अहिले यस्तै अवस्थामा छ । एसिया कप खेल्ने अवसर नजिक पुगेर पनि नेपाली टोली बञ्चित हुनुपर्‍यो । एसीसी महिला टि-ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा युएईविरुद्धको सेमिफाइनल वषर्ाका कारण रद्द भयो र नेपाल प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो । खेल्नै नपाई पराजित घोषित हुनुपर्दाको पीडाले अहिले नेपाली टोली छट्पटाइरहेको छ ।
भलिबलको ग्रासरुट प्रतियोगितामा लगानी कम
राष्ट्रिय खेल भलिवलको राष्ट्रिय स्तरमा धेरै प्रतियोगीता हुन्छन् । तर उमेर समूह र विद्यालयस्तरिय प्रतियोगिता शुन्य प्राय: छन् । ग्रासरुटमा लगानी नहुँदा भलिबलको भविष्यप्रति सरोकारवालाहरुले पटक पटक चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर संघबाट पूर्वाधारमा लगानी, ग्रासरुट प्रतियोगिता, एकेडेमी सञ्चालन नहुँदा निजी क्षेत्रले फाट्टफुट्ट आयोजना गर्ने उमेर समुहका प्रतियोगिताले नै महिला खेलाडीको उत्पादन धानिरहेको छ ।
'ट्रयाक एन्ड फिल्ड' मा राष्ट्रिय एथ्लेटिक्स संघको ध्यान नजादा खेलाडी निराश
नेपाल एथ्लेटिक्स संघ निस्क्रिय हुँदा अत्याधिक आकर्षण रहेको यो खेलको स्तर खस्कदो छ । संघ आफैले गर्ने प्रतियोगिता शुन्य प्राय: छन् । निजी क्षेत्रबाट भइरहेका एथ्लेटिक्सका प्रतियोगिता पनि म्यारानथमा बढी केन्द्रीत हुँदा \_'ट्रयाक एन्ड फिल्ड\_' ओझेलमा परिरहेको छ । झन्डै तीन वर्षको अन्तरालमा भएको एथ्लेटिक्सको राष्ट्रिय प्रतियोगिताले खेलाडीलाई म खेलाडी हुँ भनेर सम्झाउने काम गर्यो । उनीहरु भन्छन् - प्रतिस्पर्धा पनि आफैसंग मात्र छ ।
क्यानमाथि ६ वर्षदेखिको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा
विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमाथि ६ वर्षदेखि लगाएको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा गरेको छ । सरकारी हस्तक्षेप, विवादास्पद साधारण सभा तथा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै आइसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो । तर अहिले क्यानको कार्य सम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुँदै आइसीसीले नियन्त्रण पूर्णरुपमा फुकुवा गरेको हो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अन्योलमा
पाँच वर्ष अघि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरवको आयोजना भनी घोषणा गरेको पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनाउने लक्ष्य राखिएको रंगशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डि पि आर तयार भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
एनआरटी असार १४ गते प्रि–सिजन टुरमा मलेसिया जाँदै
सहिद स्मारक ए डिभिजन क्लब एनआरटी यसै साता अर्थात् असार १४ गते प्रि–सिजन टुरका लागि मलेसिया जाँदै छ । घरेलु मैदानमा तयारी गरिरहेको क्लबको मलेसिया र थाइल्याण्डको प्रि–सिजन टुर खेलाडी र क्लबलाई अनुभव बटुल्ने अवसर हुने छ । सँगसँगै पहिलो टूर चुनौतीपूर्ण पनि हुने क्लबले जनाएको छ ।
दौडमै भविष्य देख्ने युवाहरु पोखरा रंगशालाभित्र अभ्यासमा
पोखरा रंगशालाभित्र विटि्रस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुन चाहने र स्वfस्थ्यका लागि दौडिनेहरु धेरै भेटिन्छन् । त्यहि भिडमा पछिल्लो एक सातायता दौड मै भविष्य देख्ने युवाहरु अभ्यास गरिरहेका छन् । ट्यालेन्ट हन्टमार्फत छनोट भएका गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लाका ३६ खेलाडी यतिबेला पोखरा र‌गशालामा कडा अभ्यासमा सामेल छन् ।
सानो उमेरका टेनिस खेलाडीको प्रदर्शन सुधार हुँदै
खेलकुद विकासको मेरुदन्ड नै तल्लो तहमा गरिने लगानी हो । यसअन्तर्गत एकेडेमी सन्चालन, उमेर समुहका प्रतियोगिता, स्तरीय पूर्वाधार निर्माणलगायत पर्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा खेलकुदको तल्लो तहमा लगानी बढाउँदै उपलब्धि गर्ने सोचको विकास भएको छैन । त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति कमजोर छ । तर टेनिसले भने सानो उमेरका खेलाडीमा सक्ने जति लगानी गरेको छ र त्यही अनुसार खेलाडीको प्रदर्शन पनि सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।
खेलकुद विकासका सबै गुरुयोजना असफल
नेपाली टिम एसीसी महिला टि-ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप खेल्ने तयारीमा छ । महिला टिमका अधिकांस सिनियर खेलाडी मुलुकलाई ट्रफी दिलाउने योजनामा छन् । एसीसी महिला टि-ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप नेपालको एसिया कप खेल्ने लक्ष मात्र हैन, एक दशकभन्दा बढी योगदान दिएका खेलाडीलाई पहिलो ट्रफी भित्र्याउने अवसर पनि हो ।
वर्षौंदेखिको लगानी, स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता सम्भव छ । नेपाली खेलकुद क्षेत्र लक्ष्यविहीन छ भन्ने आरोप बारम्बार लाग्ने गर्छ । तर लक्ष्य निर्धारण र प्राप्तिका लागि प्रयासै नभएका भने होइनन् । सरकारले ओलम्पिकमा पदक ल्याउनेसम्मको उद्देश्य राखेर गुरुयोजना बनाएको छ । तर यस्तो गुरुयोजना कागजमा मात्र सीमित हुँदा प्रतिफल शून्य छ ।
सधै मनमात्र जित्नेकी खेल पनि ?
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले एएफसी एसिया कप छनोटको तेस्रो चरणमा निकै खराव प्रदर्शन गर्‍यो । खेलाडी/प्रशिक्षक विवाद र अखिल नेपाल फुटवल संघ एन्फा निर्वाचनको छायाँमा परेको यो प्रतियोगिताले नेपाली फुटबलको वास्तविक स्तर मापन भने गरेको छ । नेपाली फुटबलको स्तर झन् खस्किँदै गएको देखाएको यो प्रतियोगिताले एन्फाको आगामी नेतृत्व सामु चुनौती खडा गरिदिएको छ ।